TPI Services - Shandong QILU Maindasitiri & Kutengesa Co, Ltd.
Ndezvipi Ndezvitatu Kuongorora?
Isu tese tasangana nezwi rekuti wechitatu bato kuongorora mune imwe nzira kana imwe. Vamwe vanoiziva kwazvo, nepo vamwe vangave vachiri nemibvunzo mishoma mupfungwa.
Iyi posvo inopa kutarisisa kune izvo wechitatu bato kuongorora kunosanganisira uye kuti ndeapi makambani angangowana kubva kwavari.
A Third Party Inspection , kana TPI, ndiro shoko rakashandiswa akazvimirira asingasaruri rokuongorora basa inopiwa kambani vakakodzera.
Kune matatu marudzi akajairika ekuongorora kunze uko. Chekutanga kuongorora kwebato kunoitwa nevakagadziri vega vega. Yechipiri bato kuongororwa kunoitwa nemutengi kana yevatengi 'in-imba mhando timu.
Kuongorora kwechitatu kunoitwa nekambani yakazvimiririra, kazhinji inoshandirwa nemutengi, kuona kuti zvigadzirwa zvese zviri kusvika padanho remhando uye iyo nzira yekugadzira pachayo inosangana nematanho epasi rose munguva yehunhu manejimendi manejimendi system (ISO 9001), zvemagariro maitiro anogamuchirwa (SA 8000) uye manejimendi manejimendi (ISO14000).
Chimwe chikuru zvakanakira wechitatu bato kuongorora, kusiyana nevaya kuteererwa kana kuti kambani kana mutengi, riri kuti vatariri vanoita TPIs vari unbiased pedyo nedivi uye anogona saka vazopa mutongo kuti wakanaka pasina zvinopesana zvido kana bato - nepo, chokwadika, kutarisa mutengi uye zvinodiwa kuiswa kumberi. Nemazwi akareruka, sarudzo yavo inongofurirwa neyakaomarara chokwadi uye vese vatori vechikamu vegadziriro yekugadzira vanokwanisa kuwana mufananidzo wakajeka wezvavanomira muchirongwa chiripo.
Kuongorora kwechitatu kunowanzoitwa neIO 9001- makambani anozivikanwa, uye AQSIQ yakapihwa marezinesi (apo iyo yekambani inodzora mhando inopa masevhisi ayo kuChina) ine ruzivo rwakakodzera, akadzidziswa uye akasarudzika matimu pane mashoma kana akati wandei zvigadzirwa zvezvikamu. Kusarudza chechitatu bato rekuongorora mupi wedanho rakakosha mukuona yakakwana kudzora kwemhando mukufarira kwemutengi-mutengi.
Ko kambani yangu ichabatsirika here nekuongorora kwechitatu?
Mazhinji makambani anotarisa kuongorora kwechitatu bato mari inoruramiswa. Izvo zvinoitwa nemakambani ane hunyanzvi hwakasimba, anoshanda pasi mazuva ese. Vanopa maonero asina kwazvakarerekera pamusoro pehunhu hwezvinhu uye vanobvumidza kuramba vachinyatso tarisa kuenderana kwemhando yepamusoro pasiti pasina kuvapo.
Nenzira iyi, vatengi vanoziva zvizere kunyangwe vari kure, kwemaitiro ekugadzira, uye vanogona kuvaka hukama hwakavimbika nemutengesi. Zvakare, kunyangwe uchiuya pamubhadharo, TPI dzinopedzisira dzichikuchengetera mari nekubatsira kudzivirira zvikanganiso zvinodhura kana kushandisa iri-mumba QC timu.
Zviitiko apo wechitatu bato kuongorora kunodiwa zvakanyanya
Kushanda nevatengesi vatsva
Kuziva nyaya dzehunhu pa-nguva
Dzokororo yezvinhu zvehunhu zvigadzirwa (asi isu zviri nani kudzivisa kusvika pamhedziso iyi uye kuongorora izvo zvinhu zvese zvakatumirwa, pamatanho akasiyana enzira yekugadzira - zvinoda mari shoma pane kugadzirisa nyaya dzehunhu nemutengesi pazvinhu zvatotumirwa )
Kutenga zvinhu zveprimiyamu: emagetsi-ekupedzisira-emagetsi, zvigadzirwa zvemumaindasitiri, nezvimwe.
Kana iwe uchifarira wechitatu bato rekuongorora masevhisi, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu, isu tinofara kukuongorora iwe!